Mayelana NATHI - UFoshan Cerarock Ceramics Co, Ltd.
I-Xiamen Cerarock Imp. & Exp Co, Ltd.
UFoshan Cerarock Ceramics Co, Ltd.
Inkampani yakwaCerarock isungulwe iminyaka engaphezu kwengu-8 eXiamen China. Kusukela lapho, besilokhu sinikela ngemikhiqizo ye-ceramic & porcelain kanye nemiklamo yezisombululo kubathengi ngokwazisa okusha, ikhwalithi, nensiza Ngemuva kweminyaka yentuthuko, thina
bekulokhu kukhula okumangalisayo eminyakeni edlule. Futhi namuhla ukuba khona kwethu emhlabeni wonke kufinyelela emazweni angaphezu kwama-30.
UZared Wu usebenze eXiamen Minmetals Group iminyaka engaphezu kweyi-18 ethweswe iziqu kwiBus English English Major, le nkampani ephethwe nguhulumeni futhi ihlinzeka ngolwazi olukhulu ngomnumzane Zared ukuthola ikhono lakhe. Eminyakeni eyi-18 eyedlule, uZared wafunda kakhulu ekwakheni indawo yokuhlala namacala okuthumela ngaphandle, okwabeka isisekelo esiqinile sebhizinisi eliqhubekayo lokwakha.
Futhi ngonyaka we-2002, wamiswa phesheya eQatar iminyaka engu-2 futhi wathonywa kakhulu yisiko lamaSulumane lapho, yingakho igama le-ZAYED lafika. Kusuka ngo-2005, uZared ubelokhu ehlala phansi ebhizinisini le-tile, empeleni okuyindlela emiselwe yena. Njengoba isikhungo samathayili amaRustic uJinjiang eyidolobha lakubo, ekhula nemvelo yama-ceramic tile kanye nazo zonke izinsizakusebenza ezitholwa yizihlobo kwenza ibhizinisi lakhe elisha aqala ukuthuthuka ngokushesha. Ngakho-ke kungumphumela wemvelo ukuthi uCerarock athathe isimo ngonyaka we-2012.
Inethiwekhi yokukhiqiza kaCerarock iletha izitayela zakamuva nezindlela ezintsha zokungena kwamakhasimende ethu. Umthamo wethu omkhulu uhumusha ekukhetheni okukhulu nokusabalalisa ngokushesha. NgeCerarock, amakhasimende anokufinyelela okusheshayo kokuhlukile futhi, ezimweni eziningi, imikhiqizo yokuqala emakethe. Sinikeza imibala yakamuva, ukuqeda kanye nokwenziwa, okuhambisana nokusikisela okubanzi kokuxhumanisa izingcezu zezinsika nezinsika.
UCerarock uzibophezele ukukhulisa inani esililethela ikhasimende ngalinye. Iqembu le-Cerarock lihlala likhula, liqola futhi licwilisa ukuze linikele ngemikhiqizo emihle kakhulu ngenani eliphakeme.
Azikho izimpahla ezizothunyelwa kumakhasimende ethu ngaphandle kokuthi zihlolwe ngokuqinile yiQembu leCERAROCK QC; Akukho ukuthengiswa okungaxhumana namakhasimende ngqo ngaphandle kokuhlala kumasifundi ukuze ufunde inqubo yokuhlola nekhwalithi yokuhlola; "Igama lami siyisiqinisekiso sakho".
I-Headquarter Faka: i-RM 706, iXin JieChuang isakhiwo. I-No707 Hu'An Road, Isifunda i-Hu Li, Idolobha laseXiamen
Ucingo: 0086 592-5393061
Ifeksi: 0086 592-5393071
Gatsheni Foshan Faka: Cha. 01-05, Phansi 2, Hall Hall, Shiwan Sanitary Ware City, Chan Cheng District, Foshan City
Ucingo: 0086 0757-82900125
Ifeksi: 0086 0757-82900125
UCel: 0086 18927707222
I-logo yeCerarock ibukeka njenge- "WHALE"
“Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka” umele i-GLOBE okuyimakethe yomhlaba wonke.
Umbala "we-Orange" umele inkolelo eqinisiwe.
“Igama lami siyisiqinisekiso sakho” zimelela uthishanhloko wethu osebenzayo.
“Amachashazi Amathathu ngaphezulu kweCerarock” amelela iPhinosopholi Yasezulwini nomhlaba nomhlaba nabantu.
Yonke intsingiselo ithi silwela ukuba yibhuloho laseChina kanye noMhlaba ngaphansi kokuholwa yiFilosofi yaseChina.